आज जनयुद्ध दिवस « Khabar24Nepal
आज जनयुद्ध दिवस
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि शुरू भएको १० वर्षे जनयुद्धको स्मरणमा जनयुद्ध दिवस मनाइने गरिएको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको दिनको स्मरणमा जनयुद्ध दिवस मनाउने गर्दछन् ।
जनयुद्ध शुरू गरेको आज २४ वर्ष पूरा भएको छ । जनयुद्ध शुरू गरिएको सम्झनामा आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर जनयुद्ध दिवस मनाउँदैछ । नयाँ जनवादी क्रान्तिको लक्ष्यसहित बन्दुक उठाएको माओवादीले २०६३ मंसिर ५ गते हतियार बिसाएको थियो । यस अवधिमा माओवादी पार्टीमा थुप्रै परिवर्तन आए भने देशले पनि परिवर्तनको फड्को मारेको छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको छ र गणतन्त्र संस्थागत भएको छ । यद्यपि जनयुद्धको उद्देश्य यति मात्र थिएन भनी आलोचना गर्नेहरू पनि छन् । शुरूशुरूका दिनमा खुलामञ्चमा यो दिवस भव्यरूपमा मनाइन्थ्यो भने अहिले पार्टी कार्यालयको एउटा कोठामा सीमित भएको छ । २०५२ साल फागुन १ गते रोल्पा, सिन्धुली र गोरखाका प्रहरी चौकीमा एकैसाथ हमला गरी सशस्त्र युद्धको शुरूवात गरिएको थियो । त्यसपछि १० वर्षसम्म निरन्तर चलेको माओवादी जनयुद्धमा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट १७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने हजारौँ घाइते, अंगभंग र बेपत्ता भए । यता माओवादी पनि विभिन्न टुक्रामा बाँडिए ।
जनयुद्धको थालनी गर्ने मुख्य व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’नेकपा एमाले र माओवादीको मिलन पश्चात नेकपा को दुई अध्यक्ष मध्ये १ भएर रहनुभएको छ । माओवादीबाट अलग भएर डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति नेपाल गठन गर्नुभएको छ । सोही पार्टीबाट अलग भएर मोहन वैद्य किरणले नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) गठन गर्नुभएको छ भने र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पनि माओवादीबाट अलग भएर नेकपा (माओवादी) पार्टी गठन गर्नुभएको छ । जनयुद्धबाट आएका यी नेताले अलग अलग पार्टी बनाएका छन् र जनयुद्ध दिवस पनि अलग अलग मनाइरहेका छन् । २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आयो । माओवादी पूर्वलडाकुहरू नेपाली सेनामा समायोजन भई राष्ट्रिय सेनाको अङ्ग पनि बनिसकेका छन् । दश वर्ष सशस्त्र युद्धमा बिताएका माओवादीले १२ वर्ष शान्ति प्रक्रियामा पनि बिताए । अझ पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको छैन । प्रचण्डको नेतृत्वमा दुईपटक र डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एक पटक सरकार बनेको छ । जनयुद्धको मर्म र लक्ष्य पूरा नभएको ठान्ने नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र फेरि जनयुद्धमा जाने उद्घोषका साथ नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को नामबाट सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको छ । दश वर्षसम्म जनयुद्धको नेतृत्व तहमा भूमिका निर्वाह गर्नुभएका डा. भट्टराईले माओवादीबाट अलग भएर नयाँ शक्ति नेपाल गठन गर्नुभएको छ । माक्र्सवाद र माओ विचारधारा पुरानो भयो भन्दै आर्थिक क्रान्तिका लागि नयाँ शक्ति नाम दिएर पार्टी खोल्नुभएका छ डा. भट्टराईले ।
दश वर्षसम्म जनयुद्ध गरेका माओवादीका नेताहरू नै त्यसको उद्देश्य पूरा नभएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । त्यसमध्ये संघियता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता लागू भयो तर अझै राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ बाँकी रहेको बताउछन जनयुद्ध लडेका नेताहरु । जनयुद्धले महत्वपुर्ण उपलब्धि दियो तर त्यो अझै स्थापित हुन सकेको छैन । २०५२ देखि हालसम्ममा जे जति परिवर्तन भए यसलाई जोगाउदैं र संस्थापन गर्दै लैजाने हो भने जनयुद्धको सहि मुल्याङकन भएको देखिन्छ तत्र हाती आयो हाती आयो फुस्सा हुने देखिन्छ ।
सन्तोष अर्याल, तारकेश्वर न.पा-३, काठमाडौं
मधेश प्रदेशप्रति असहमति राख्दै जनकपुरमा पुत्ला दहन
रौतहटका निवेश यादव बने एमालेको देशकै कान्छा जिल्ला सदस्य
बाराका कम्प्युटर अपरेटर घुस रकम सहित पक्राउ
दुई जनाको शव फेला
जनकपुरका कर अधिकृत घुससहित पक्राउ
१० बुँदेमा कुनै जालझेल नगरौँ, विभाजनले कसैलाई फाइदा छैन : अष्टलक्ष्मी शाक्य